Mohamed Salah Oo Aan Soomin Maanta iyo Berri Oo ay Dhacayso Cayaarta Finalka Champions League | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Mohamed Salah Oo Aan Soomin Maanta iyo Berri Oo ay Dhacayso Cayaarta Finalka Champions League
(25-5-2018) Xiddiga kooxda kubbadda cagta Liverpool ee Mohamed Salah ayaa faadir ah maanta oo Jimce ah iyo berri oo Sabtida ah, kaddib markii ay dhakhaatiirta iyo tababareyaashiisu ku qanciyeen inuu iska daayo.
Salah oo isku diyaarinaya ciyaarta finalka Champions League ee habeen dambe ay iskaga hor iman doonaan Real Madrid, ayaan soomin Jimcaha maanta oo uu qaadanayey tababarkii ugu dambeeyey iyo berri oo Sabti ah oo fiidnimada ay ciyaartu dhici doonto.
Tababaraha jidh-dhiska Liverpool oo lagu magacaabo Ruben Pons oo u warramay idaacadda fadhigeedu yahay waddanka Spain ee Cadena SER ayaa shaaciyey in Mohamed Salah uu faadir yahay maanta iyo berri, taas oo ay hore usii qorsheeyeen.
“Waxa aanu joognay Marbella oo aanu kooxda nafaqayntu ay sii qorsheeyeen. Beeri (maanta) iyo maalinta ciyaarta ma soomi doono.” Sidaas ayuu yidhi Ruben Pons.
Mohamed Salah ma ciyaarin hal kulan intii ay bilaabantay bisha barakaysan ee Ramadaan maadaama uu horyaalku dhamaaday, hase yeeshee, waxa uu tababar qaatay muddo ku dhow laba toddobaad iyadoo uu gudanayo waajibaadka soonka.